Resaky ny mpitsimpona akotry : toe-tsaina iombonana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : toe-tsaina iombonana
Tsy misy fitsaharana mifandimby mitanilaila ny sampana fiadidiana ny raharaham-panjakana eo amin’ny andry sy sampana maro karazana ao amin’ny ambaratonga samihafa misy azy. Matoa moa mitsingevaheva izy ireo dia ao ny fanozongozonana. Indraindraina izany demôkrasia izany nefa manahirana no manatanteraka azy, na ny maro an’isa na ny mpanohitra dia samy azon’ny fakampanahy handingana ny fepetra fototra rehefa manelingelina ny faniriany sy ny tetikadiny hanjakazakana ireo fepetra ireo. Eo ihany ny fitiavan-toerana sy ny tsiron’ny tombontsoa sitrahana rehefa mipetraka an-tseza fa mifangaroharo amin’izany ny hetaheta fitadiavana fahehana sy fanjakazakana.
Rehefa eo am-pihinanana dia mety hitombo ny hatendana ka hirona any amin’ny fahasarotan-kanina, io angamba no mitarika ny maro an’isa hiezaka amin’ny fampiasana hery amin’ny fanangonana ny fahefana eo amin’ny sehetra rehetra ho azy irery. Ny mpanohitra koa etsy andaniny dia mahatsiaro tena ho mangetaheta ambony rano mahita ireo mpifaninana mandidy manapaka sady mitavana, tsy mahari-pery tsy mahandry tantana ka manao izay ho afany amin’ny fandravana ny fe-potoana voapetraky ny lalàna.
Tao anatin’ny iray volana izao, dia nifandimby niseho ny tetika fandravana ny Birao Maharitra ao amin’ny Antenimirampirenena, ny tetika mangina misoka miadana fanaovana izany ao amin’ny Antenimierandoholona, ny fanovana governemanta moa dia io lasa resabe toy ny sazy miantona io, any amin’ny tanan-dehibe maro mitongilahila ny fahefan’ny ben’ny tanàna.
Ny rafitra ve no ratsy sa ny toe-tsaina no efa simba? Tsy ny hery ankilany ihany no azo ampangaina momba ny fanaovana fanozongozonana, izay mahita tombontsoa amin’ny ratsy no itoeran’ny fanendrikendrehana.
Samy efa nodiavina anie na ny voka-dratsin’ny fanakorontanana ateraky ny fangalana fahefana an-keriny, na ny fahamaizinana mitera-doza noho ny fifehezan’ny hery tokana azavain’ny hevitra tokana.
Iray volana fotsiny izay dia ireo ny sakantsakana nifanesy, sakana tokoa moa izany eo amin’ny fanatanterahana ny asa andavanandro, aiza ho aiza amin’izany no ahitana tokontany hanondrotana ezaka ho fisikinana izany fampandrosoana izany? Vitsy ny mpino! Samy miandry fotsiny ny fidonan’ny fanoto ao anaty laona, tsy famotsim-bary akory io fa akon’ny fikatroky ny mpilalao pôlitika tsy ankanavaka.